Welcome to Aayaha Nolosha » CAYAARYAHAN LAGU IIBSADAY 1.3 MILYAN, GURYANA LA SIIYAY AYAA ROOTI-GADE ISKU BADALAY
CAYAARYAHAN LAGU IIBSADAY 1.3 MILYAN, GURYANA LA SIIYAY AYAA ROOTI-GADE ISKU BADALAY
October 6, 2018 - Waxaa Qorey : Caaqil Dalmar -
Cayaaryahanka weeraryahanka ah ee sanadkii 2007-dii ku guuleystay laacibka sanadka ee South America ayaa la sheegay in waqtigaasi uu bartilmaameed weyn u ahaa tababarihii hore ee Red Devils Sir Alex Ferguson, una sharaxnaa Manchester United oo heshiis la gaartay.
Xiddiga Salvador Cabanas oo u cayaarayay xulka Uruguay balse intii aysan la soo wareegin Manchester United ayaa madaxa xabad looga dhuftay, rajadiisiina ay wiiqantay.
Cabanas ayaa xaalad qatar ah galay muddo bil ah kadib markii madaxa xabad loogu dhuftay mar uu waqti ku qaadanayay goob lagu caweeyo oo ku taala dalka Mexico sanadkii 2010-kii.
Muran ka dhex dhashay Suulida ama Musqusha Club-kii uu ku caweynayay dhaliyaha reer Uruguay ayaa sababtay in madaxa xabad lagaga dhufto, dhibaatadaasoo ka reebtay inuu sii cayaaro.
Cabanas ayaa u soo ciyaaray dhowr kooxood oo ka dhisan South America kahor inta uusan ka fariisan ciyaaraha 2014-kii.
Weeraryahanku dhacdadaasi kuma geeriyoon oo dhimasho ayuu ka badbaaday, isagoo xilligaasi heshiis kula galay Manchester United inuu dhanka weerarka kala ciyaaro Wayne Rooney iyo Dimitar Berbatov, iyadoo heshiiskaasi oo hordhac ahaa uu ku kacayay 1.3 milyan oo bound, balse kooxda ka dhisan America oo 10-gool uu u dhaliyay 44 kulan oo uu u saftay xulka Uruguay ayaa labo laabtay mushaarkiisa, guryana ka siisay Acapulco iyo Cancun si uusan uga tegin.
Weeraryahankaas fursadahaas badan helay haatan waxa uu Rooti ku iibiya dalkiisa, wuxuuna yiri: “Waxaan isku dayayaa inaan horey u sii socdo, waan jeclahay shaqada rooti gedista, dadka wax iga iibsanayana way i gartaan, markay shaqada igu arkaan waxayna wax iga waydiiyaan cayaaraha kubbada cagta iyo heerkii aan ka soo gaaray, waxaan heystaa madadaalo badan oo aan shaqadeyda cusub ee rooti gedista ku wajahan”.